तीज- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
घरभरि चहलपहल बढेको थियो  । सानिमा, फुपू दिदी, माइजूहरू  ।
मामुले रातो सारी, चुरा, पोते लगाएको देखेर देवी पनि निकै दङ्ग थिइन् । कक्षा ४ मा पढिरहेकी देवीलाई तीज खुबै रमाइलो लागिरहेको थियो ।
‘तीजको रहर आयो बरी लै...’ गीत पूरै नआए पनि भाका मिलाई मिलाई छमछमी नाँचिरहेकी थिइन् उनी ।
मामुले सोध्नुभो, ‘देवी, आज निकै खुसी देखिन्छौ नि, किन हो ?’
मस्किएर जवाफ दिइन्, ‘मामु आज हजुरलाई कति राम्रो देखिएको छ । रातो सारी, रातो चुरा... ।’
‘अरू दिन म राम्रो देखिँदैन थिएँ र ?’
‘अरू दिन टि–सर्ट प्यान्ट, वान पिस लाउनुहुन्थ्यो । आज बेग्लै राम्रो क्या । वर्ल्डकै बेस्ट मामु ।’
‘अरू दिन त मामुलाई अफिस जानुपर्ने भएकाले सजिलो लुगा लगाउने गरेको नि,’ छोरीको चुरुकफुरुक देखेर मामुले जिस्किँदै भन्नुभयो, ‘हजुरआमाले हिजो पकाएको दरले राम्रै काम गरेजस्तो छ । मामुको निकै प्रशंसा गर्न थाल्यौ त... ।’
‘हो, हिजो मामुहरूले पकाएको मीठा मीठा खानेकुराको दर त बिर्सर्नै सक्दिनँ नि,’ देवीले भनिन्, ‘आज त केही पनि खान्नँ । म’नि तीजको व्रत बस्ने हो, फुपूदिदी र माइजूहरूजस्तै । कर गर्ने होइन नि मलाई, खाऊखाऊ भनेर... ।’
देवीको कुराले मामु छक्क पर्नुभो । ‘साना केटाकेटीले पनि व्रत बस्छन् त ? ठूलो भएपछि बसौली । अहिले हातमुख धोएर दूध र बिस्कुट खाऊ,’ सम्झाउन खोज्नुभयो, ‘होइन, बेकारको स्कुल बिदाले दिक्क बनाउँछन् बच्चाहरूले...।’
मामुको कुराले देवीलाई रिस उठ्यो । उनी जिद्दी गर्न थालिन्, ‘सानी भए’नि म त व्रत बस्ने हो । अस्ति फुपूले किनेर ल्याइदिनुभएको रातो चुरा दिनुस् । रातो लेहेंगा पनि दिनुस् ।’
त्यति नै बेला देवीका बाबा पनि आइपुग्नुभो, ‘हैन, केको गन्थन हो मामु–छोरीको ?’
‘हेर्नु न, मामुले मलाई तीजको व्रत बस्नु हुँदैन, सानी छेस् भन्नुहुन्छ,’ देवीले बाबालाई कुरा लगाउन थालिन्, ‘बाबा म ठूली भइसकेँ नि हैन ? फोर क्लास पढ्ने भइसकेँ नि है ।’
बाबा मुसुमुसु हाँस्नुभो । अनि भन्नुभयो, ‘कसले भन्यो मेरी छोरी सानी छ भनेर १ ठूली भइसकी । ज्ञानी छे । आफ्नो काम आफैं गर्छे, होइन त ?’
‘बाबा म पनि व्रत बस्छु । रातो चुरा र लेहेंगा लगाउँछु नि है,’ उनले बाबासँग पनि अडान दोहोर्‍याइन् ।
‘हुन्छहुन्छ । बाबा पनि व्रत बस्ने, छोरी पनि बस्ने, ओके १’ ‘ओके बाबा..’ उनी खुसी हुँदै कोठाभित्र पसिन् ।
‘तपाईं पनि बच्चाको अगाडि चाहिँदो नचाहिँदो कुरा गर्नुहुन्छ के ? तीजको व्रत पनि केटा मान्छेले बस्छन् ?’, मामुले बाबासँग गुनासो गर्नुभयो, ‘बच्चालाई पनि उकास्ने कस्तो हजुर त...?’
‘न रिसाऊ न । भगवान्को व्रत जोकोही पनि बस्न भइहाल्न नि,’ बाबाले भन्नुभयो, ‘छोरीले पनि परम्परा र रीतिरिवाजबारे जानोस्, बुझोस्, सिकोस् । खाली रिसाएर मात्रै हुन्छ । एकछिन् भोकै बस्छे, भोक लागेपछि फेरि खानेकुरा मागिहाल्छे नि ।’
मामु र बाबाको गन्थन चलिरहेकै थियो । देवी दौडँदै आइन्, रातो लेहेंगा र चुरामा चिटिक्क परेर ।
‘बाबा म कस्ती देखिएको छु ?’
‘आहा.. मेरी छोरी त कति राम्री देखिएकी.. चिटिक्क,’ बाबाले म्वाइँ खाँदै अँगालो हालेर भन्नुभो, ‘कसले बनाइदियो यति राम्री ?’
बाबाको प्रशंसाले देवी फुरुक्कै पर्दै भनिन्, ‘फुपूले पाउडर लगाइदिनुभो अनि गाजल पनि । हेर्नु त बाबा, यो चुरा अस्ति फुपूले नै ल्याइदिनुभएको ।’
‘ल.. ल.. अब मन्दिर जाऔं, छोरी पनि तयारी भएकी छे,’ फुपूले देवीलाई सुम्सुम्याउँदै भन्नुभो ।
धैरै गहना लगाएको देखेर बाबाले मामुलाई सम्झाउन थाल्नुभयो, ‘मन्दिर जाँदा यत्तिका गहाना लगाउन हुन्न के... खोल । भीडभाडमा हराउँछ, चोरी हुन सक्छ ।’
‘ह्या... वर्षदिनको तीजमा पनि गहना लगाउन नपाउनु,’ गुनासो गर्दै मामुले केही गहना फुकालेर राख्नुभयो ।
मन्दिरमा भीड थियो । उनीहरूले बाहिरबाटै भगवान्को दर्शन गर्ने योजना बनाएका थिए । तर देवीको मामुलाई मनले मानेन । उहाँले भन्नुभयो, ‘म त भित्रै गएर दर्शन गर्छु ।’ मामु र फुपू दुवैजना पूजा गर्ने लाइनमा बस्नुभयो ।
बाबाले देवीलाई मन्दिरवरिपरि घुमाउन थाल्नुभयो । देवी दङ्ग पर्दै बाबासँग घुम्न थालिन् । ठाउँठाउँमा पिउने पानी बाँडिरहेका थिए । कतै पसलमा मिठाई र सेल पकाइरहेको देखिन्थ्यो । त्यो देखेर मुख रसाए पनि व्रत बसेकाले देवीले बाबालाई कुनै माग राखिन, चुप लागिरहिन् ।
कति व्रतालुहरू कमजोरीले लडेका थिए । उनीहरूलाई स्वयंसेवकले लगिरहेका थिए । देवीले सोधी, ‘बाबा किन यी आन्टीहरूलाई के भएको ?’
‘भोको पेट भएर कमजोरीले बेहोस् भएको नानु । भोको बस्दा ग्यास्टिक हुन्छ, रिंगटा लाग्छ । कमजोर भइन्छ नि त,’ बाबाले बुझाउनुभयो ।
कतिपय महिलाहरू गहना हरायो भन्दै रोएको/चिच्याएको देखेर देवीलाई नरमाइलो लागिरहेको थियो । साना बच्चा भीडमा अभिभावक हराएकाले रोइरहेको पनि उनले देखिन् । उसलाई पनि डर लाग्यो । उसले बाबाको हात झनै बलियोसँग समाइन् ।
उनीहरू वरिपरि घुमेर मन्दिर अगाडि आइपुग्दा मामु र फुपू पनि पूजा सकेर बाहिर निस्किनुभएको थियो । दौडँदै मामुको हात समाइन् देवीले । आफूले देखेका कुरा सुनाइन् ।
मामुले सबैलाई टीका र प्रसाद लगाइदिनुभयो । खाने प्रसाद पनि हातमा राखिदिनुभयो । देवीले प्रसाद लिन मानिनन् । उनले भनिन्, ‘आज त व्रत, दिनभरि केही खानुहुन्न भनेको होइन ? म त प्रसाद पनि खान्नँ ।’
‘त्यसो भन्नुहुन्न । पूजापाठ सकिएपछि प्रसाद खानुहुन्छ । बरु भोको पेट बस्नु हुन्न । अघि ती आन्टीहरूजस्तै कमजोर भएर लडिन्छ, बुझ्यौ ?’ बाबाले सम्झाउनुभयो, ‘अझ फलफूल त व्रत बसेका बेलामै खानेकुरा हो । ल यो स्याउ र जुस खाऊ त, मामु, छोरी, फुपू सबैले ।’ मामु र फुपूले पनि बाबाको कुरा काट्न सक्नुभएन । सबैले फलफूल र जुस खाए । मन्दिरवरिपरि निकै रमाइलो थियो । जताततै गीत घन्किरहेको थियो । मानिस समूह–समूहमा नाचिरहेका थिए । देवी पनि तीजको गीतमा नाच्न थालिन् । बाबा, मामु र फुपूले ताली बजाउनुभयो ।
रेजिना पाण्डे प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ११:३१
भाद्र ८, २०७६ हिमेश
ठूलो पान्डा धेरैले मन पराउने जनावर हो  ।
यसको सबैभन्दा ठूलो कारण पान्डाले देखाउने चकचकी अर्थात् केटाकेटीपन हो । यो निकै आकर्षक हुने गर्छ । त्यसैले पान्डा भनेपछि धेरै मानिस हेर्न लोभिने गर्छन् । पान्डाको यही लोकप्रियताका कारण ‘स्टार’ जनावर पनि भन्ने गरिन्छ । हाम्रो छिमेकी देश चीनले ठूलो पान्डालाई धेरै महत्त्व दिएको छ । यसलाई देशकै परिचयजस्तो बनाएको छ । चीनले आफ्नो साथी देशलाई ठूलो पान्डा उपहार पनि दिने गर्छ । त्यसैले चिनियाँ कूटनीतिको एउटा मुख्य विशेषता नै पान्डा रहेको छ । सन् २००८ मा चीनको राजधानी बेइजिङले गृष्मकालीन ओलम्पिक्स आयोजना गरेको थियो । त्यति बेला प्रतियोगिताको मस्कटका रूपमा पान्डालाई प्रयोग गरिएको थियो । चिनियाँ भाषामा यसलाई ‘ता स्योङ माओ’ भनिन्छ । यसलाई अंग्रेजीमा जायन्ट पान्डा र पान्डा बियर दुवै भनिन्छ । ठूलो पान्डा र रेड पान्डामा फरक छ । दुवैको गुण, प्रवृत्ति र स्वभावमा धेरै अन्तर छ । ठूलो पान्डको मुख्य विशेषता हो– यसको आँखा र कानमा ठुल्ठूला गोलाकार कालो रंग । यसको शरीरको अरू भागमा पनि यस्ता काला धब्बा पाइन्छन् । यसैले पनि ठूलो पान्डा र रातो पान्डा ठ्याक्कै छुटिन्छन् । रेड पान्डा नेपालमै पनि पाइन्छ । ठूलो पान्डाको मुख्य आहारा भनेको बाँस हो । पान्डा बाँसलाई खुबै मन पराएर खोजीखोजी खाने गर्छ । जंगलतिर बस्ने पान्डाले घाँस पनि खाने गर्छ । अझ केहीले त मासु पनि खाने गरेको पाइएको छ । चिडियाखानामा राखिएका पान्डालाई अन्डा, माछा, मासुसँगै सुन्तला र केरा दिने गरिन्छ ।
चीनमा ठूलो पान्डाको सबैभन्दा मुख्य बसोबास सिचुवान प्रान्तमा छ । सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेन्डु हो र यहाँ ठूलो क्षेत्र ओगटेको ‘छेन्डु पान्डा बेस’ स्थापना गरिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य ठूलो पान्डाबारे लगातार अनुसन्धान गर्नु हो । यहाँ पान्डाको प्रजनन् प्रक्रिया पनि गरिन्छ । यो पान्डा बेसको स्थापना सन् १९८७ मा गरिएको थियो । अहिले यो सर्वसाधारणका लागि खुला छ । यहाँ दिनहुँ हजारौंले भ्रमण गर्छन् । पयर्टकका लागि पनि यो निकै आकर्षकस्थल बनेको छ । विशेषतः यहाँ विद्यार्थीले धेरै भ्रमण गर्छन् । प्रायः शैक्षिक भ्रमण हुने गर्छन् । विद्यार्थीले पान्डाबारे जति पनि जानकारी लिन चाहन्छन्, ती सबै यस पान्डा बेसमा उपलब्ध छ । त्यस क्रममा पान्डालाई प्रत्यक्ष हेर्न पाउने त भयो नै । स्थापनाका बेला यहाँ जंगलबाट उद्धार गरिएका ६ ठूला पान्डा थिए । अहिले संख्या बढेर ८३ पुगेको छ । यसमध्ये धेरै यहाँ नै जन्मेका र हुर्केका हुन् । यो दुर्लभ जनावरमा पनि हो । चीनका विभिन्न चिडियाखानामा अहिले २ सय ४० को हाराहारीमा मात्र ठूला पान्डा रहेको अनुमान छ । चीन बाहिर २७ देशमा ठूला पान्डा छन् । ती चीनले उपहार दिएका हुन्, जसको संख्या ४९ पुग्छ । यी चिडियाखानमै छन् । जंगलतिर भने अझै १ हजार ६ सय जति पान्डा रहेको अनुमान छ । विश्वभर दुईदेखि तीन हजार संख्यामा ठूलो पान्डा रहेको अनुमान छ ।
(चीनस्थित छेन्डु पान्डा बेसको भ्रमणपछि)
प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ११:२८